How to beamobile application developer | USAHello ကနေအလုပ်အရင်းမြစ်များ | USAHello
The hourly wage for mobile application developer varies widely from $21 သို့ $150 to per hour, depending on experience and location. The national average salary in 2018 was around $100,000 တစ်နှစ်လျှင်. But individual jobs may payalot more oralot less.
Able to code, စမ်းသပ်, debug, and monitor changes in mobile applications
If you have no training at all in computers, or if you are not ready for college, you can start withacomputer or coding course. အတော်များများကအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်များတန်ဖိုးနည်းကွန်ပျူတာသင်တန်းများပူဇော်. သူတို့ကအထူးသဖြင့်အသစ်ရောက်ရှိလာသောနှင့်အင်္ဂလိပ်သင်ယူသူအဘို့အအတန်းရှိစေခြင်းငှါ. သငျသညျအနီးအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်ကိုရှာပါ.
ငါမရှိသေးပါအတွေ့အကြုံရှိသည်ဆိုပါကအဘယျသို့? ငါအဘယ်မှာရှိ start ပါဘူး?
သငျသညျကွန်ပျူတာနည်းပညာ entry-level အလုပ်ရှာတှေ့နိုငျ. အခြေခံကွန်ပျူတာနည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုကိုလေ့လာပါ, ထိုကဲ့သို့သောနိုင်တဲ့ coding သို့မဟုတ်ပရိုဂရမ်းမင်းအဖြစ်. ထိုအခါသင်သည် entry-level အလုပ်ရသင်လိုအပ်အတွေ့အကြုံရရှိနိုငျ.
သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရဖို့ဘယ်လိုပိုပြီးထွက်ရှာမည် ကွန်ပျူတာနည်းပညာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အ. ဥပမာ, သင်လုပ်နိုင်သည်:
မှာအလုပ်အကိုင်များရှာမည် အန်စာ, နည်းပညာအလုပျသမားမြားအတှကျအွန်လိုင်းမှအလုပ်အကိုင် site ကို
မှာအလုပ်ရှာမည် Upwork, အင်တာနက်-based လွတ်များအတွက်အလုပ်အကိုင်အ noticeboard